ပြည်သူတွေ အချင်းချင်း သွေးမကွဲပဲ ရည်ရွယ်ချက် ပျောက်ပဲ တန်ဖိုးထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလာတဲ့ အဆိုတော် အောင်ထက် – Cele Oscar
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဂီတလောက မှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပြီး အသံပါဝါ ကောင်းကောင်း နဲ့ သီချင်းကောင်းတွေ သီဆိုတတ် တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အခိုင်အမာ ရရှိထားသူကတော့ အဆိုတော် အောင်ထက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။အောင်ထက် ကတော့ “အိပ်မက်စုံရာ” သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကြီးနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု တွေကို စတင်ရရှိကာ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းနေပြီး လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်း ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်း ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
လူထုလှုပ်ရှားမှု တွေကို အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်တာတွေကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ အောင်ထက်ကတော့ လတ်တ လောက်မှာလည်း တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ အားဖြည့်ပါဝင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။အောင်ထက် ကတော့ ရည်ရွယ်ချက်မပျောက်၊ သွေးမအေး သွားဘဲ အချင်းချင်းတန်ဖိုးထားကြဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေ ပြည်သူပရိသတ်တွေကို တိုက်တွန်း ပြောပြလာပါတယ်..။
“ရည်ရွယ်ချက် မပျောက် ကြေးသွေးမ ကွဲကြေးအချင်းချင်း တန်ဖိုး ထားကြေးမမေ့ကြေးအရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်✊✊✊RejectMilitaryCoup WeWantDemocracy Civil_Disobedience_Movement SaveMyammar. .” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပါ..။ပရိသတ်တွေ ကလည်း အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ဖို့အတွက် အားလုံးနဲ့ အတူ ကြိုးစားပါဝင် နေကြတဲ့ အကြောင်းတွေနဲ့အတူ အောင်ထက် ကိုလည်း အားပေးစကား တွေ အသီးသီးပြောထားကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်..။
ပရိသတျကွီးရေ.. ဂီတလောက မှာ ဆှဲဆောငျမှု ရှိပွီး အသံပါဝါ ကောငျးကောငျး နဲ့ သီခငျြးကောငျးတှေ သီဆိုတတျ တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ တဈခဲနကျအားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အခိုငျအမာ ရရှိထားသူကတော့ အဆိုတျော အောငျထကျပဲဖွဈပါတယျနျော..။အောငျထကျ ကတော့ “အိပျမကျစုံရာ” သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲကွီးနေ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှု တှကေို စတငျရရှိကာ အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးမှာ လြှောကျလှမျးနပွေီး လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေမှောလညျး ပွညျသူတှနေဲ့တဈသားတညျး ရပျတညျနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ..။
လူထုလှုပျရှားမှု တှကေို အငျတိုကျအားတိုကျ ပွုလုပျတာတှကွေောငျ့ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူထားခွငျးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲကတဈယောကျအပါအဝငျဖွဈတဲ့ အောငျထကျကတော့ လတျတ လောကျမှာလညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ အားဖွညျ့ပါဝငျနတောလညျး ဖွဈပါတယျ..။အောငျထကျ ကတော့ ရညျရှယျခကျြမပြောကျ၊ သှေးမအေး သှားဘဲ အခငျြးခငျြးတနျဖိုးထားကွဖို့ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာကနေ ပွညျသူပရိသတျတှကေို တိုကျတှနျး ပွောပွလာပါတယျ..။
“ရညျရှယျခကျြ မပြောကျ ကွေးသှေးမ ကှဲကွေးအခငျြးခငျြး တနျဖိုး ထားကွေးမမကွေ့ေးအရေးတျောပုံ အောငျရမညျ✊✊✊RejectMilitaryCoup WeWantDemocracy Civil_Disobedience_Movement SaveMyammar. .” ဆိုပွီး ရေးသားပွောပွထားတာပါ..။ပရိသတျတှေ ကလညျး အရေးတျောပုံအောငျမွငျဖို့အတှကျ အားလုံးနဲ့ အတူ ကွိုးစားပါဝငျ နကွေတဲ့ အကွောငျးတှနေဲ့အတူ အောငျထကျ ကိုလညျး အားပေးစကား တှေ အသီးသီးပွောထားကွတာလညျး တှရေ့ပါတယျ..။